४० बर्ष पहिले यसरी लेखिन्थ्यो बुबाआमालाई पत्र « Khasokhas Follow @khasokhasmag
बुबाको मुख हेर्ने दिनको सन्दर्भ पारेर मैले करिब ४० बर्ष पहिले विदेश (त्यतीबेला भारत) वाट पठाईएका चिठी जस्ताको तस्तै उतार्ने प्रयास गरेको छु । गाउँमा त्यस्ता धेरै चिठीहरु मलाई वाच्न (वाचन गर्न) लगाइन्थ्यो ।
तिनताका आज झैँ स्कुल कहाँ हुनु ? बालश्रम सम्बन्धि कानुन बनेको पनि थिएन । छोराले कखरा चिनेपछि १० -१२ बर्षकै उमेरमा रेल चढ्ने सौभाग्य पाउथे । दिल्ली बम्बै सयर गर्ने सौभाग्य । हुलाकको व्यवस्था पनि त्यती राम्रो थिएन । दशैंमा छुट्टीमा आउने लाहुरेहरुले ल्याएको चिठी पढ्ने जिम्मा मेरो हुन्थ्यो । चिठी पढे बापत पाइने चकलेटको मज्जा नै बेग्लै । त्यतीबेला घोकन्ते बिद्या हुने हँुदा पुरै किताब मुखाखर पार्ने म र एउटै व्यहोराका ती चिठी पनि मुखै हुन्थे । मैले पढ्दा असुद्ध पढेपनि सुधार्ने कोहि थिएनन् । मेरो चिठी वाचनको चर्चा नै हुने गथ्र्यो । त्यतीबेला एउटा लाहुरेले लेखेको यस्तो चिठी मेरो स्मरणमा अझै ताजै छ । बाहिरी खाममा लैजा चरी हावा सरी, मेरो मातापिताको पाउमा पर्ने गरी लेखिएको पत्र यस्तो हुन्थ्यो ।
स्वस्ती श्री ६ श्री । आगे तेहा राज गरी बस्नु भयका बाबा आमा जना २ मा म तपाईको परदेशी छोराको तर्फबाट साँझ बिहान गंगा जलले स्नान गरी पाऊ परी शीर नुगाई सेवा ढोग छ जी । म यहाँ तपाईहरुको माया र भगवानका कृपाले आजका मिति सम्म निका आरामका साथमा दिन बिताई रहेको छु । तपाइँहरुको जिय शरीरमा पनि निका आराम हुनुहोला भनि भगवानसंग पुकारा गरिरहेको छु । साथै घरका गन्यमान्य, काकाकाक, दाइभैज्यु दिदी बहिनी सबैमा साइनो माफिकको सम्झना सुनाइ दिनुहोला । तपैकी बुहारी डल्ली लाई पनि प्यार सम्झना सुनाई दिनु होला ।
आगे, हाम्रा इस्टमित्र मामा मैज्यु भाइबैनी, माथी कटहरबारी ठूली आमामा ढोग सुनाइ दिनु होला । माथी ठूल्दाई, ठूली भौज्यु, भै बहिना ,तल्लाघरे काइला कैली आमा, नारायण गुरु, भान्से बा, कालीपारे आबै, लाल प्रसाद दाई र खनिया सुवारा ठूलाबा ठूली आमा र बाटा पल्तिर कान्छी दिदीलाई समेत साइनो माफिक सेवा ढोग छ जी । सबै इस्टमित्रहरुलाई साइनो माफिकको माया छ जी । मलाई तपैकी बुहारीले तेहाँ खाई यहाँ चुठ्न आउनु भनेर लेखेकी रहिछ । किन तेसरी लेख्न पर्यो र ? कुरा बुझेकै हो । आमा बुबाको सेवा गर्न नछोड । दाउरा घाँस र मेला पातामा जाने काम गर्नु ।
कालले साँचे भाग्यले बाँचे अर्को दशैँमा भेट हुम्ला । यो चिठी सुन्नेलाईसुन्कोमाला वाच्नेलाई फुलको माला ।
लौत आज लाइ बिदा पाऊँ ।
वाच्ने (पढ्ने) को गल्ति छैन । मेरो केही गल्ती भय माफ पाम् ।
हजुरको आज्ञाकारी छोरो